Isihlahla simboza → Izinsimbi zensimbi nezinsimbi zensimbi
manje izakhiwo ezincane zasemadolobheni futhi isembozo sesihlahla. Lezi zinto ezisebenzayo nezinobuhle zingenziwa ngezinhlobonhlobo zezinto zokwakha.
Izihlahla ezikhona isikhala samadolobha kuyisiqinisekiso sempilo yabahlali, sokuphumula kanye nemizwa yobuhle yabantu abahlala endaweni eluhlaza. Izihlahla zihlanza umoya, zikhiqize umoya-mpilo, zehlise izinga lokushisa elikhona ngezinsuku ezishisayo, zandise umswakama, zithuthukise ukuphathwa kwamanzi futhi zinciphise umsindo wedolobha namandla omoya.
Kodwa-ke, ukuze zikhule futhi zikhule kahle, kufanele zivikeleke ezenzakalweni eziyingozi ezingabachitha.
Kungakho izembozo zesihlahla zisetshenziswa kaningi, ezingapheleli ngaphakathi amapaki nasezigcawini, kepha futhi nasezikhundleni nasezikhungweni zedolobha.
Izimbozo zivikela izihlahla ezilwaneni, abahamba ngezinyawo nezimoto ezihamba ngazo.
Izembozo zesihlahla nensimbi nokugaya izihlahla zensimbi
Izembozo zesihlahla namagremu wensimbi nezihlahla zensimbi zakha ukuvikela okuhlobisayo kwezitshalo ezingatholakali kuphela endaweni yasemadolobheni, kodwa futhi izingadi.
Akhiqizwa ngosayizi ahlukahlukene nobukhulu.
Izembozo zesihlahla sensimbi zinemfashini nemiklamo yesimanje ukuze ivumelane nanoma yisiphi isikhala samadolobha naphansi.
Abaqaphi besihlahla okuhloselwe ukuvikelwa kwabo bangaba ngamavundla noma mpo.
Izembozo, eziklanyelwe njengamagagasi esihlahla esivundlile, isb., Zivikela uhlelo lwezimpande zesihlahla kunoma yikuphi ukulimala kwemishini, ngenkathi kuqinisekiswa ukuhamba kwamanzi kwamahhala.
mpo isembozo sesihlahla zenza imisebenzi yokuvikela nokwenza ubuhle, ziqinisekisa ukukhula kwamahhala kwezitshalo ngaphandle kokusongelwa abedlula, izimoto noma izilwane.
Isitayela esifanele sesembozo sesihlahla esisetshenzisiwe sibenza babe yinto ethile yokwakha umhlobiso wesikhala esincane sedolobha.
Izembozo zensimbi ezisebenzayo nenhle zezihlahla ziyisivikelo esithandwa kakhulu zezihlahla, futhi ngenxa yemilo nemibala yazo yanamuhla, ziba umhlobiso wezikhala zomphakathi.
Isembozo sesihlahla kuya izakhiwo ezincane, okukhona ngempumelelo ekuthuthukisweni kwamadolobha, lapho kusetshenziswe khona izimila zasemadolobheni endaweni enomkhawulo, njengomhlobiso wemvelo ekwakhiweni kwezindlela zokuthenga nezokuxhumana.
Izembozo zensimbi zezihlahla ziyizixazululo zobuhle ezivikela uhlaza lwasemadolobheni, kepha ngasikhathi sinye uvumele ukungena kwamahhala kwamanzi ohlelweni lwezimpande.
Izihlahla ezisedolobheni ziba sengozini enkulu yokulimala, hhayi ukulimala kwamakhemikhali kuphela, ngokwesibonelo okubangelwa yimfucumfucu yemoto eyeqile, kepha nomonakalo wemishini. Ngakho-ke zidinga ukunakekelwa okukhethekile. Ngakho-ke, ezindaweni ezinendawo enomkhawulo kanye nokugcwala okusindayo kwezimoto nabahamba ngezinyawo, izindawo eziluhlaza kufanele zivikelwe ngokukhethekile. Isimbozo esifanelekile sesihlahla sivikela lesi sitshalo hhayi kuphela ekonakalisweni, kodwa nakwezinye izinto.
Ama-grilles avundlile namakhava abheke phezulu enziwe ngensimbi yensimbi nensimbi amelana kakhulu nezinto zangaphandle nomonakalo owenziwe ngomshini, ngakho-ke zivikela izihlahla ngokuphelele. Izinto zezembozo zemithi, ezifaniswe ngokufanele nezihlahla nezikhala zasemadolobheni, zingumhlobiso owengeziwe wendawo.
Uhlobo lwendabuko noma lwesimanje lwesihlahla nesembozo luhambisana ngokuphelele nesimo sendawo yasemadolobheni enikeziwe.
Bheka futhi: Okuthunyelwe kocingo
Izinduna zemithi eqondile ziyasetshenziswa nasezingadini zasekhaya nasezivandeni, lapho zivikela khona ngempumelelo izihlahla zezithelo emonakalweni obangelwa izilwane eziququda amagxolo noma amaqabunga ezihlahla. Izithelo zimboza Ngakho-ke ziyadingeka njengasemadolobheni, ngoba ziqinisekisa ukuphepha kwezitshalo ezingadini nasekulungiseleleni.
Kwenzeka ukuthi umdlalo wasendle noma amablashi amancane anciphisa izihlahla ngokungenakuphikiswa, ikakhulukazi amabanga amancanyana. Izembozo zezihlahla ezifanele zizovumela ukuba zikhule ngokuthula.
Izembozo zesihlahla ezinezimbobo ezincane zizozibonakalisa kahle kakhulu ebusika, lapho amahheya kanye nezinyamazane zifuna ukudla futhi zibheke ngabomvu ezihlahleni ezivandeni. Izembozo ezinjalo zizonikeza isihlahla umoya omncane nokukhanya, futhi ngasikhathi sinye zivikele izilwane ekulimaleni isiqu sesihlahla.
Ukuze ungalimazi izimpande zezihlahla zezithelo nezihlahla zokuhlobisa ngesikhathi sokucheba, kufanelekile ukusebenzisa izembozo zesihlahla ezimboza izimpande futhi zivimbe ukukhula kotshani ezungeze izihlahla.
Izembozo zesihlahla ziye zaba yinto evamile yokuvikela izitshalo zasengadini kanye nohlaza lwamadolobha emonakalweni womshini. Ngaphezu kokumboza, izinhlobo ezahlukahlukene zama grates ezihlahla zisetshenziselwa ukuvikela uhlelo lwempande zesihlahla ekulimaleni futhi luqinisekise ukufinyelela kwamanzi esihlahleni.
Bheka futhi: Okuthunyelwe ngokhonkolo
4.9 / 5 ( 29 amavoti )
ukugcotshwa kwe-Esgro ngezihlahlaIzigaxa zesihlahlaintengo yethenisi lesihlahlaisigaxa sesihlahla sombalaizinto zokwenza izinto zensimbi zezihlahlaphonsa izingcezu zensimbi zezihlahlainkomba yensimbi ngentengo yezihlahlaizakhiwo ezincane zezembozo zesihlahlaizembozo zensimbi zezihlahlaisigaxa somuthi wensimbiisembozo sesihlahlaukushayelwa kwezihlahla ze-allegroukushayelwa kwezihlahla zama-castoramaintengo yokushiswa kwezihlahlai-leroy merlin yokushayisana kwezihlahlaisembozo sezihlahla eziluhlaza okwesibhakabhakaisembozo sesihlahla se-obiisembozo semithi ye-olxukugcotshwa kwezihlahla zezitheloukugcotshwa kwezihlahla zezithelo i-Allegrointengo yezitheloukuthengiswa kwezihlahla zezitheloumkhiqizi wezicucu zesihlahlaizembozo zokuvikela zezihlahlaisembozo semitha yezihlahlaOnogada besihlahla nensimbi futhi baphonsa amagilebhisi esihlahla sensimbiizembozo zensimbi zezihlahlaisembozo sesihlahlaisihlahla sihlanganisa intengoumuthi umboza izakhiwo ezincaneisembozo semithi yezitheloizisekelo zezihlahla ezenziwe ngomthiintengo yemifino yokuhlanjululwaizihlahla ezishibhileisembozo somuthi sensimbi